Antoine Griezmann oo si qoto dheer kaga hadlay xiriirka kala dhexeeya Lionel Messi – Gool FM
Antoine Griezmann oo si qoto dheer kaga hadlay xiriirka kala dhexeeya Lionel Messi
(Barcelona) 10 Sebt 2020. Xiddiga reer France iyo kooxda Barcelona ee Antoine Griezmann ayaa sheegay in xiriirka uu la leeyahay Lionel Messi uu wanaajin doono mudada soo socota.
Antoine Griezmann oo isku diyaarinaya xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee Barcelona, ​​sida laga soo xigtay wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu sheegay:
“Xilli ciyaareedkii hore aad ayuu iigu adkaa aniga iyo dhamaan ciyaartoyda, laakiin hada waxaan dib u bilaabi karnaa wax walba”.
“Xiriirka aan la leeyahay Lionel Messi wuxuu la mid yahay xiriirka aan la leeyahay Kylian Mbappe, bilowgii ma jirin wax isfaham ah oo naga dhexeeyay”.
“Laakiin waqti dheer ayey nagu qaadatay ka hor intaanan gaarin heerka wada noolaanshaha, xiriirka igaala dhexeeya Messi wuxuu ka hagaagi doonaa dhinac walba”.
“Waxaan ku jiraa xaalad wanaagsan oo kooxda Barcelona ah, waan ogahay in kooxda iyo tababaraha ay i aaminsan yihiin, waxaana rabaa inaan arko asxaabteyda mar kale isla markaana aan sameeyo wax walba, si aan ugu guuleysto dhamaan tartamada inta suurtogalka ah, kaddib markii aan dhameysanay xilli ciyaareed koob la’aan ah, waana waxaan muddo dheer ka dhicin Barca”.
Si kastaba ha noqotee, Barcelona ayaa ku guuldareysatay inay ku guuleysato tartan kasta oo ay qeybta ka aheyd xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee 2019-2020, iyadoo ay joogaan xiddigo sida Lionel Messi iyo Antoine Griezmann.
Barcelona oo xiiseyneysa xiddig ka tirsan Inter Milan, mana ahan Lautaro Martínez
“Waxaan heysanaa wax aan kaga fiicanahay heshiisyada kooxda Chelsea” –Klopp